साउदीमा जेल परेका भुपराजको परिवारको दुखेसो : सरकारले हाम्रो आँसु देखेन — Hamro Sanchar
आज : २०७५ चैत्र १० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
साउदीमा जेल परेका भुपराजको परिवारको दुखेसो : सरकारले हाम्रो आँसु देखेन
मोहन पौडेल प्रकाशित : २०७५/१२/२ गते
काठमाडौं, चैत २– ‘भाइ जेल परेको ११ महिना पुगेर १२ महिना लाग्यो । भाइ निर्दोष छ भन्दै म कहाँ पुगिनँ होला, तर हाम्रो पीडा कसैले सुनेन । घरमा कसैका आँखा ओभाना छैनन्’ टंक बुढाथोकीको बोली बोल्दाबोल्दै रोकियो ।
साउदी गएका भुपराज जेल परेपछि टंकको मात्रै होइन, परिवारका सबैको ओठमुख सुकेको छ । गुहार माग्दामाग्दै थाकेका छन् परिवारका सदस्य । तर पनि भुपराजका बारेमा केही जानकारी पाएका छैनन् ।
लाखौं युवा विदेशमा छन् । दिनमा सयौं युवा समस्यामा परेको खबर आइरहन्छ । सहयोग र उद्दार गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थालाई भुपराजको समस्या पनि त्यस्तैमध्येको एउटा लाग्यो होला । तर परिवारलाई त्यो कुराले झनै पीडा दिइरहेको छ ।
तेलमा पानी मिसाएको आरोपमा जेल
महोत्तरीको बर्दिवास कालापानीका भुपराज बुढाथोकी झण्डै चार वर्षअघि साउदी अरब जानुभयो । कम्पनीले १३ महिना काम दिएन । त्यसपछि काम दिएको कम्पनीले फर्किन २३ दिन हुँदा भुपराज पक्राउ पर्नुभयो ।
आरामको कम्पनी, तेल उत्पादन गर्ने तेल, सधैं त्यही काम गर्दै आएका भुपराज त्यो दिन पनि तेल भरिएको ट्याङ्कर लिएर गन्तव्यमा पुग्नुभयो । त्यो गाडीमा लगिएको तेल परीक्षण गरियो ।
परीक्षण गर्ने व्यक्तिले त्यो तेल गुणस्तरहीन भएको बताएपछि तेल लिने कम्पनीले आरामको कम्पनीसँग तेल गुणस्तरहीन हुनुको कारण सोध्यो । तर कम्पनीले त्यो तेल आफूले नपठाएको दाबी गर्‍यो ।
आरामको कम्पनीबाट तेल लोड गरेको सबै कागजात भुपराजसँग सुरक्षित थियो । कागज भुपराजले देखाउनु पनि भयो । तर आरामको कम्पनीले त्यो स्वीकारेन । कम्पनीले जिम्मा नलिएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रहरी बोलाएर भुपराजलाई पक्रिन लगाए ।
घर फर्किन केहीदिन मात्रै बाँकी रहेका बेला भुपराज जेल परेको खबर आएपछि के गर्ने, कसो गर्ने परिवारले सोच्नै सकेन । ‘सुरुमा पार्टीका नेतालाई भन्दा हुन्छ कि भनेर स्थानीय नेतादेखि पार्टीका ठूल्ठूला नेतालाई पनि भेटें तर केही भएन’ टंक भन्नुहुन्छ ।
नेता र पार्टीका कार्यालय धाउँदा उपाय नलागेपछि उहाँ विदेशमा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई उद्दार गर्ने ठाउँखोज्दै काठमाण्डौको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा पुग्नुभयो ।
विभागले टंकलाई कन्सुलर सेवा विभागमा पठाइदियो । कन्सुलर सेवा विभागले सन् २०१८ जुलाई २६ तारिखमा पहिलो पटक भुपराजको बारेमा बुझ्न अनलाइनमार्फत निवेदन लिएको छ ।
त्यही दिन साउदी अरबमा रहेको नेपाली दूतावासलाई भुपराजका बारेमा जानकारी गराउन भनेपछि दूतावासले भुपराज तेलमा पानी मिसाएको आरोपमा पक्राउ परेको जानकारी पाएको जवाफ दिएको छ ।
साउदीको कानुनअनुसार भुपराजलाई ९ महिनाको जेल सजाय हुने जानकारी पाएको दूतावासको भनाई छ । दूतावासले भनेको ९ महिना पुगेको छ । अहिले भुपराजको अवस्था के छ भन्ने बारेमा आफूहरुले केही जानकारी नपाएको टंकले गुनासो गर्नुभयो ।
अहिले टंक कहिले प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीमा त कहिले कन्सुलर सेवा विभागमा फोन गरेर त्यही गुनासो गरिरहनुहुन्छ । त्यति मात्रै होइन उहाँले साउदी अरबमा रहेको दूतावासमा समेत फोन गरेर बारम्बार यसका बारेमा जानकारी मागिरहनुभएको छ ।
तर आफूले भाइका बारेमा स्पष्ट जानकारी नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । ‘यत्तिका समय भइसक्यो के भइरहेको छ भनेर कहाँ कसले भनिदिन्छ , के हामी यो देशका नागरिक होइनौं’ टंकले प्रश्न गर्नुभयो ।
दूतावासबाट अपडेट भएको छैन : कन्सुलर सेवा विभाग
कन्सुलर सेवा विभागले भने घटना र सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै घटनामा ढिलो हुन सक्ने बताएको छ । यसबारेमा दूतावासले जानकारी गराएपछि आफूहरुले ‘अपडेट’ गर्ने भन्दै दूतावासका एक कर्मचारीले आफूहरुलाई जानकारी आउना साथ परिवारलाई जानकारी गराउने बताएको छ । उज्यालोबाट
वैदेशिक रोजगार विभागका नासु फुयाँल ६० हजार घुससहित पक्राउ
अन्तरजातीय विवाहपछि ज्यान जोगाउन भौंतारिएको यो जोडी !
कुवेत हिँडेकी दोलखाकी महिला तरकारी किन्न भन्दै रुपैडिहासम्म !
मास्टर्स पढिरहेका विद्यार्थी कोरिया जान रातभरि लाइनमा
४८ वर्षीया शान्ति कक्षा ८ मा, भन्छिन्- पढाइ महत्वपूर्ण रहेछ
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको पराकाष्ठा : आफ्नै भूमिमा सडक बनाउन हस्तक्षेप, सीमास्तम्भ नै गायब
कञ्चनपुर, चैत ८– नेपाली भूमिमै सडक निमार्णका क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हस्तक्षेप गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिका–९, ब्रह्मदेव बजारनजिकै आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरिरहका बेला एसएसबीका जवानले भीमदत्त नगरपालिकाको काम गर्न रोकेका हुन् । उनीहरुले त्यो क्षेत्र विवादित रहको भन्दै सीमा सर्भे टोलीले नक्साङ्कन नगरुञ्जेल सडक निर्माण...
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली कामदारको मृत्युदर कहाली लाग्दो
स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुँदा विदेशमा कठिन श्रम गर्न जानु नेपाली युवाको बाध्यता बन्दै आएको छ ।तर आयआर्जन गरी सुनौलो भविष्यका लागि ऋण गरी विदेश भासिएका मध्ये दैनिक औसत दुई जनाको मृत्यु हुने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र ५ सय बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको...
किशोरीको सामूहिक बलात्कार भएको आरोपमा तीन जना पक्राउ
काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिका–७ मा एक किशोरीको सामूहिक बलात्कार भएको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । यही चैत ३ गते साँझ मण्डनदेउपुर नपा–६ स्थित इन्द्रावती नदी किनारमा १४ वर्षीय एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने चारमध्ये तीनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बलात्कार आरोपित मण्डन देउपुर नपा–६ देउपुरका २४...
साउदी जेलबाट श्रीमतीलाई चिठी : ‘माफ भए घर फर्कौंला, नभए हाँसीहाँसी फाँसी चढौंला’
भोलि देखि सुरु हुने एसइई परीक्षाको तयारी पूरा, चार लाख ७५ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा ‘परिवर्तनका स्वरहरू-२’ लोकार्पण
आजको राशिफल : वि.सं.२०७५ साल चैत्र ०९ गते शनिबार
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओली सहित ८ पक्राउ